Wareegyo Wareegsan oo ku Saabsan Warshadaha Webka ee Bilaashka ah iyo Barnaamijyada Mining Mining
Macluumaadka iyo macluumaadka shabakada waxaa laga heli karaa siyaabo badan, iyo habka ugu caansan ayaa adeegsanaysa API-ga ama kala-rogista bogga internetka adoo bixiya lambarka saxda ah. Maqnaanshaha Webka ayaa si ballaaran loo isticmaalaa kuwa iyagu bilaabay ganacsigooda ama waxay ku saabsan yihiin inay bilaabaan mid. Sababtoo ah tababarkan, waxaad xoqin kartaa goobo badan oo suurtagal ah oo aad habeyn kartid macluumaadka shuruudahaaga. Halkan waxaan ka wada hadalnay qodobbada ugu fiican sawirrada webka iyo barnaamijyada macdanta macluumaadka.
Nasiib darro, warbaahinta bulshada iyo macluumaadka shabakada furan waxay inta badan ku yaallaan foomamka aan haboonayn. Iyadoo Computyne, waxaad si fudud u xoqin kartaa tiro badan oo ah goobo iyo qaababka xiriirka bulshada. Waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad ku kaydiso sawirrada qalabkaaga adiga oo aan wax dhibaato ah. Computyne waxay bixisaa shabakad degdeg ah, sax ah oo lagu kalsoon yahay ama adeegyadii kaydka xogta. Waxay kaa caawin kartaa inaad ka tirtirto xogta laga soo bilaabo Wikipedia, calaamadaha, bogagga hurdiga ah, bogagga cad, Khariidadaha Google, Yelp, iyo Twitter.
2. Grepsr ee Chrome:
Si ka duwan intooda badan qalabkii duuduubka shabakada ee soo ururiya xogta ama macluumaad faa'iido leh, Grepsr Haddii aad u baahan tahay in aad isku xirto xogtaada adigoon u baahnayn calaamado, waxaad u baahan tahay inaad ku xirto qalabka kaydinta daruuriga ah iyo inaad bilowdo xogta aad u baahan tahay. Grepsr wuxuu badiyaa ku keydiyaa macluumaadka Google Drive, laakiin Dropbox, Amazon, iyo FTP waa la heli karaa. si aad u raadsatid xog cusub oo hadda jira iyo waqtigii lagaa rabay si aanad u baahnayn inaad waqti ku qaadato helitaanka macluumaad faa'iido leh internetka.
Tarantoola waa a Barnaamijka awoodda shabakada ee awoodda leh ee loo yaqaan 'interface user friendly', waxay ku dhowdahay sanado badan waxayna tirtirtay tiro badan oo ah goobo iyo blogyo.Waxay kaloo kaa caawin kartaa inaad ku uruuriso goobtaada iyo soo saaro xogta habeysan ee aan habaysanayn
iDataGuru waxay bixisaa macluumaad sax ah oo aan halis lahayn oo la awoodi karo Ku xigeen, adeegyo boggaga shabakada, shaashadda sawirada, iyo adeegga qoraalka. Inaad noqoto software hoggaamineed, iDataGuru ayaa xogtaada si deg deg ah ujira oo ay ka helaan xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka, khubarada IT, bangiyeyaasha, saraakiisha maaliyadda, iyo horumarinta webka.
BotScraper waa boodh iyo shabakad waxtar leh oo wax lagu qodo iyo qalab macdan ah oo qashinka ku qodaya internetka oo ka helaya dhammaan xogtaada adiga. Waxay markaas dib u rogeysaa macluumaadka macnaha ah ee macluumaadka faa'iido leh, siinaya gees u ah ganacsigaaga internetka. Waa farsamo 100% oo khatar la'aan ah oo isku dhafan leh adeegyo kale oo websaydhka ah si ay kuu siiyaan adeegyo loo habeeyay, oo la socda filashooyinkaaga iyo fulinta baahidaada ganacsi. BotScraper waa barnaamij qadarin ah oo xog-isweydaarsi ah kaas oo ku kiciyay internetka iyada oo ay jiraan tiro fara badan oo qaabaysan. Tani waxay sidoo kale soo saari kartaa emails aadna xoqin kartaa boggaga calaamadeysan iyo emails-codadka iyada oo aan wax arrin ah Source .